Amehlo - ke ingenye izitho ezibaluleke kakhulu okuqonda, kodwa, ngoba zonke ukubaluleka kwalo, behlala phakathi olungavikelekile kakhulu phambi imvelo bangaphandle. Ngakho-ke, ngaphandle ukuvikelwa okungeziwe ngeke zikwazi ukuthi zenze, ikakhulukazi uma ukushushuluza noma i-snowboarding. Ezintabeni, le nkinga kuyaphuthuma kakhulu, futhi ngempela, e imaskhi ukushibilika eqhweni ebusika - a imfanelo kuphoqelekile athlete.
Okokuqala udinga ukukhomba izinkomba main yokuvikela, okumele libe buso, yilokho-ke kumelwe ukuvimbela:
UVB uhlobo ngemisebe ye-UVA;
izinhlayiya zeqhwa neqhwa;
Kodwa, ngaphezu usizo kwalo, ukushibilika eqhweni imaski kumelwe abe ergonomic futhi kungaphazamisi sekubuyeketwa umsubathi.
Ukuma kanye nosayizi
Ngamunye wethu ine isakhiwo ngazinye ebusweni. Kodwa lezi linye, ngenhlanhla, kangako, ngakho mayelana nanoma yisiphi buso yokukhiqiza ukuze oda asikhulumi. Iningi imikhiqizo self-ukuhlonipha kanye abakhiqizi waqikelela ukuba esitolo amashalofu gqizisa imiklamo eziningi ezahlukene kanye amaphetheni ukuze ivumelane zonke ukunambitheka kanye nosayizi.
ukushibilika eqhweni imaski kuhluke ngobukhulu by inkomba eyodwa kuphela - ububanzi ubuso. izinhlobo eziningana eziyisisekelo ozimele bungabonakala, okuyinto baziwa emhlabeni wonke - jikelele, abesifazane nezingane.
A owande kuyigama jikelele, futhi uhla enkulu imifanekiso kokubili ukuma ngobukhulu, kuhambisana umklamo. onobuhle Female kukhona okunezinhlobonhlobo ukusabalala ezincane, kanye inkomba main kulesi simo kungaba imiklamo besifazane futhi yehlise ububanzi onobuhle. Buso Snowboard izingane ezifana nokukopisha ukuklanywa onobuhle ezivamile, kodwa ikhumbula ikhanda anatomy wengane.
Lena ngenye yezinto ezibucayi lokuzikhethela. I ebalulekile umehluko ski buso kusukela ukushibilika eqhweni Yileso engela neuropathy umbono. Snowboarders kudingeka esibanzi, kuyilapho skiers ezanele ukuze abone ikushiya izenzakalo. Lokhu kungenxa kuphela umdlalo othize, hhayi kanye nezici zabo ezingokomzimba umuntu ngamunye.
Ake sizame ukubona okungcono ukushibilika eqhweni imaski ezivela abakhiqizi ezahlukene, kucatshangelwa imibono lochwepheshe kule ndawo futhi libuyekeza abanikazi uhlobo ajwayelekile imishini zemidlalo.
Imodeli ubonakala ngokuba uhlelo ukumiswa esiyingqayizivele ohlukanisa lens design eziyisisekelo futhi usebenza njengoba isikhwama sealable. Njengoba standard, ungabona ezimbili lens eliphezulu. Uma lo msubathi banamanani lens, imaskhi kungenziwa zikhubazekile kuzo zonke izindawo, bengabheki ngesikhathi esifanayo ukuphepha isakhiwo.
Zonke izingxenye ehlezi phansi ngaphandle backlash noma izikhala. Abanikazi kunalokho ngokufudumele mayelana imodeli, bakubheka njengobuthakathaka elula futhi kunengqondo kakhulu. Yengeza isipuni esigcwele intengo itiyela imaskhi, kodwa sicabanga ukuthi ulayini yangaphambili womkhiqizo namanje ehamba phambili ekuhwebeni ezemidlalo libonisa ngezindlela eziningi, izindleko kungenziwa ngokuthi kuthethelelwe.
Dragon ukushibilika eqhweni imaski ku show kakhulu ngaphezulu zokugcina ARH1 chungechunge. Futhi yena namanje uyawuthanda kakhulu, ikakhulukazi isizukulwane esisha yabadlali. ARH2 baningi ngisho nangaphezu sibonga ergonomic futhi enza izinto ezihlukahlukene ukuze eliphezulu lens nezilandiso kanye ukhetho olukhulu.
Imodeli isebenzisa SwiftLock ubuchwepheshe obusha oluvumela ndaba amasekhondi esikhundleni lens ngokwanele ukudonsa isigwedlo amancane umzuzwana kamuva lens esikhundleni kuyoba endaweni.
snowboarders Abaningi ukushiya okubuyayo mayelana "Dragon", siphawula akhululeke lula imodeli, kanye osheshayo lens shift. Abanolwazi abasubathi kancane edangele alyapistost design, kodwa kuyindaba yomuntu siqu, ngakho-ke lokhu ntwana ayikwazi ngokuthi iphutha. Ungase futhi uqaphele ukuthi base uya icala nice ukushibilika eqhweni buso, futhi kuba okuncane, kodwa bejabule.
Smith mina / O7
Sha abayekanga ekukhiqizeni onobuhle ezithandwayo futhi ezimisiwe I / I O kanye / OX futhi washo nokungaphezu kwalokho. Umugqa omusha libhekene yokuthi esikhundleni the lens sihamba ngaphandle ngisho ingawuthinti. Kwanele ukuthola inkinobho elincane phezulu futhi ukunyakaza okuncane ukuba esikhundleni lens ubudala ngentsha ukuze ugweme zeminwe angemahle ingilazi.
On izinkundla ezikhethekile, eziningi okubuyayo mayelana entsha imodeli: ukushibilika eqhweni imaski ebusweni we "Smith" Kwatholakala hhayi kuphela mncane futhi ukhululekile, kodwa futhi luhambisana nawo wonke nezigqoko ezivamile. Ezinye akhononde sinesandla esiqine kakhulu umklamo buso, Nokho, njengakwezinye izinto, kuyindaba of ukunambitheka.
Oakley ukushibilika eqhweni imaski intengo ezahlukene iphuzu futhi bebelokhu ebhekwa into yomntakabani. Kodwa onobuhle zibiza esungulwe brand nje - imaski ezahlukene ukubonakala enkulu, futhi lokhu kuyiphuzu elibalulekile ukuze ibhodi lokusheleleza eqhweni.
Ngaphezu kwalokho, onobuhle babe umbono omuhle kokubili ngaphandle nangaphakathi. Umklamo "Flaydek" ahlome lens ubuchwepheshe bamuva kusukela brand. Le kit kuhlanganisa lens amabili isembozo amahle, okuyinto futhi ejabulisa.
Nakuba abanikazi abaningi ukubuyekeza kwabo akhononde okusezingeni eliphezulu intengo uhla, ongoti kanye snowboarders wazibonela ukuthi uthola lokho ukukhokhela, ngakho imikhiqizo yenkampani Oakley kungenziwa ngokuthi uhlobo (siqala eqolo) ejwayelekile kule ndawo.
Uma ufuna kwezemidlalo ukurekhoda konke okwenzekayo emhlabeni, kodwa isifiso ukuba baphathe ikhamera kusaba khona, lokhu model - nje inketho yakho.
Ngaphezu esikhundleni lula lens, imaskhi ifakwe ikhamera encane ekuthwebuleni zonke izikhathi ezithakazelisayo. Le nguqulo entsha ye HD2 inguqulo encane ikhamera, futhi kuwusizo kakhudlwana ukuphathwa ukusebenza, njengoba kuqhathaniswa emgqeni wangaphambilini. New futhi enamandla ibhethri ngokwanele kuzovumela ukuqhuba sigameko okuqhubekayo, futhi ikhamera, ngokuvumelana abaklami, uyakwazi ekuthumbeni ngisho nge ukukhanya esabekayo.
Kodwa akugcini lapho, imaskhi has Wi-Fi, lapho ufuna kalula ukwabelana isithombe noma ividiyo nabangani bakho. Izinsimbi kanye kuzwakala, yebo, kakhulu imodeli, ngakho intengo enendawo ezifanele - ukuthenga "ithoyizi" Awukwazi zonke lover.
Kunoma ikuphi, nahlulele by ukubuyekezwa abanikazi imaski, imodeli zaphumela yimpumelelo: ergonomic, ukukhanya, ecacile futhi emuhle. Abaningi, yebo, bedidwe intengo, kodwa leyo kungenye umbuzo. Empeleni, ukuphambanisa izinhlamvu imaskhi ulinganisela ngokuphelele futhi ngaphezu isici-ocebile isithombe nevidiyo enezinto eziningi nabanye abangewona ezemidlalo-chip, ezifana imidlalo kanye "Skype". Abanye bathi okubeka obala kakhulu imodeli olandelanayo kanye ukusweleka design, kodwa futhi kuyindaba yomuntu siqu, futhi ukusebenza wabasubathi, le nkomba akunamthelela.
"Boar-12 Molot": kuzibuyekezo, izintengo
T 12 (kuhlasimulise isibhamu) Ukucaciswa, intengo, ukubuyekezwa